चिया-कफी दिनमा कति पिउँदा राम्रो ? - Postmandu
चिया-कफी दिनमा कति पिउँदा राम्रो ?
2022-02-05 PostmanduLeaveaComment on चिया-कफी दिनमा कति पिउँदा राम्रो ?
चिया वा कफी मात्रै पिउँदा दुवै जोखिम कम हुन्छन् । तर दैनिक २ देखि ३ कप कफी वा चिया सेवन गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी हुने अध्ययनको ठहर छ ।
अध्ययनअनुसार दैनिक ३ कप कफी वा चिया पिउने मानिसमा डिमेन्सियाको जोखिम नपिउने मानिसमा भन्‍दा २८ प्रतिशत कम र मस्तिष्कघातको जोखिम ३२ प्रतिशतले कम हुन्छ ।
Tagged coffee tea
राहत वितरणमा लफडा ! बाढीपीडित बसेको ठाउँमा प्रवेश निषेध
2021-06-20 2021-06-21 Postmandu
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, नामको टुंगो लाग्न बाँकी
2021-01-05 2021-01-05 Postmandu